5 Dariiqo oo Xirfadleyda Xiriirka Dadweynaha ay ku hormarin karaan gododkooda | Martech Zone
Talaado, Maarso 8, 2016 Sabti, Febraayo 13, 2021 Douglas Karr
Shakhsiyeyn shakhsiyeed waxay kordhisaa sicirka beddelashada. Taasi maahan aragti, waxtarka shaqsiyeed ayaa la caddeeyey in ka badan iyo in ka badan. Haddii aad tahay xirfadle xiriirka dadweynaha, beddelkaagu waa awooddaada inaad daabacaad ama saameyn ku la wadaagto sheekada ama dhacdada macmiilkaaga. Waa macquul kaliya in shaqsiyeynta ay gacan ka geysato isbedelka, laakiin xirfadlayaashu waxay sii wadaan inay burburiyaan xiriirkooda (xusuusnow… taasi waa R ee PR) oo leh nidaamyo iyo farsamooyin dufcado iyo qaraxyo leh.
Waanu qornay oo wadaagnay sida loo sameeyo blogger ka hor. Waxaan sidoo kale wadaagnay sida AAN loo dhigin baloog. Intii aan jidka ku sii jirnay, waxaan wadaagnay qalab wacyigelin ah oo ka caawiya xirfadleyda Xiriirka Dadweynaha joogtaynta xiriirradooda wacyigalin iyo inay qabtaan shaqo ka wanaagsan sidii ay xiriir ula yeelan lahaayeen. Tilmaam: Ma dhisayso emayl farmaajo oo kuu furaya inaad taageere waqti dheer ahayd, oo aad dhawaan aqrisay boostada ____, oo aad jeclaan lahayd inaad la wadaagto macluumaadka ku saabsan macmiilkaaga. #yaraa
New cilmi baaris laga sameeyay Cision wuxuu tilmaamayaa meelaha ay aqoonyahanada xiriirka bulshada u baahan in la hagaajiyo waa:
79% saamileeyaashu waxay rabaan xirfadlayaasha PR inay jaangooyaan garoomo ku habboon caymiskooda
77% saamileyaasha waxay rabaan xirfadleyaasha PR inay sifiican u fahmaan waxa ay ka baxayaan.
42% saamileeyaashu waxay rabaan xirfadlayaasha PR inay bixiyaan macluumaad iyo ilo khibradeed.
35% saamileeyaashu waxay rabaan xirfadlayaasha PR inay ixtiraamaan dookhyadooda, taas oo 93% doorbidaan emaylka.
Waxaa laga yaabaa in tan ugu muhiimsan ay tahay in 54% wariyeyaashu ay daba socdaan sheeko xeel dheer sababta oo ah faahfaahin buuxda oo lagu daray badeecada, dhacdada ama faahfaahinta mowduuca. Arimaha tayada! Tirakoobka kaliya ee aan ka daalay warbixinta oo dhan ayaa ah in war-saxaafadeedyada wali loo arko inay muhiim u yihiin wariyeyaasha. Waxaan u maleynayaa inay taasi tahay
Ka Akhriso Xaalada Warbaahinta 2016 ka Go'aan
Maalintii oo dhan waan sii degi doonnaa Martech Zone oo waxaan haystaa in yar oo xirfadlayaal PR ah oo had iyo jeer dhagtayda leh maxaa yeelay waxay ixtiraamaan waqtigayga markay sheekada qorayaan. Tirakoobka kaliya ee aan ka daalay warbixinta oo dhan ayaa ah in war-saxaafadeedyada wali loo arko inay muhiim u yihiin wariyeyaasha. Waxaan u maleynayaa inay taasi tahay sharaxaad aan caddayn ugu fiican. Runtii dan kama lihi haddii ay tahay war-saxaafadeed ama sheeko si fiican u qoran… laakiin ma raadsado warsaxaafadeedyo mana aanan helin muddo dheer.
Tags: 2016goyntainfographicboorarbaashaalprxiriirka dadweynahagaroomada xiriirka dadweynahagobolka warbaahinta